ဆောက်ဂိတ်နဲ့သာမက လုခ်ရှောနဲ့ပါ အလွဲတွေ ပြောပြီး အရှက်ရခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညို – Sports A2Z
ဆောက်ဂိတ်နဲ့သာမက လုခ်ရှောနဲ့ပါ အလွဲတွေ ပြောပြီး အရှက်ရခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညို
ရိုးမားနည်းပြသစ် ဂျိုဆေး မော်ရင်ညိုကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ နည်းပြခဲ့စဉ်က ဘယ်နောက်ခံလူ လုခ်ရှောနဲ့ မတည့်တဲ့ကိစ္စကတော့ လူသိအတော်များခဲ့ပြီး သူတို့ကြားမှာ မကျေလည်မှုတွေ ရှိခဲ့ချိန်မှာ အင်္ဂလန်သားအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ နည်းပြဟောင်းကို ဟားတိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို မနေ့ညက ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှာ ဟာရီကိန်းနဲ့ မက်ဂွိုင်းယားတို့အတွက် နှစ်ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ လုခ်ရှောက ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာတော့ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေက မော်ရင်ညိုအတွက် တစ်ခုခုပြောစရာများ ဖြစ်မလားလို့ အမေးခံရချိန်မှာ သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ “ဒီလိုဗျ။ ဂျိုဆေး ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာက အရေးမကြီးပါဘူး။ သူ Talk Sport မှာ အလုပ်လုပ်နေတော့ ပြောချင်တာလျှောက်ပြောခဲ့တာဖြစ်သလို အဲ့ဒါက သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ သူကြိုက်တာ သူပြောလို့ရတယ်လေ”လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
"He can say whatever he likes, I just keep my head down, ignore everything. My main objective is to help England."
Who is Luke Shaw talking about? #beINEURO2020 #EURO2020 #UKRENG
Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/z7yYFH9UJY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 3, 2021
“ကျွန်တော်ကတော့ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်နေမှာပဲ။ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပဲ အာရုံစိုက်ထားပြီး ကျန်တာ အကုန် လျစ်လျူရှုထားပါတယ်။ လက်ရှိတာဝန်က လေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာ ကြိုးစားအားထုတ်ရင်း နိုင်ငံအသင်းကို ဘာဖြစ်ဖြစ် အကုန်ပေးဆပ်ပြီး ကူညီပေးဖို့ပဲလေ”လို့ ပြောခဲ့ပြီး ဝေဖန်သံတွေကို နားထောင်လေ့မရှိကြောင်းနဲ့ အပြောသာ အဖတ်တင်တဲ့ မော်ရင်ညိုကို ချေပြသွားခဲ့တာပါ။
သူပြောပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မော်ရင်ညိုက “လုခ်ရှောကစားတာက ပိုပိုပြီးကောင်းလာတယ်ဗျ”လို့ မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့ပြီး သူ့ တပည့်ဟောင်းရဲ့ မှတ်ချက်ကို အရှက်ပြေပုံစံနဲ့ ပြောသွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ အင်္ဂလန်သားရဲ့ ဖြေသွားပုံကို သဘောကျခဲ့ကြပြီး ဖြေအပြီးမှာ ရယ်သွားတဲ့ပုံကိုလည်း နှစ်သက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် နောက်ခံလူဟာ အုပ်စုတွင်းပွဲစဉ်တုန်းက ချက်အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်မှာလည်း မော်ရင်ညိုရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရသေးတာဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်ကစားပုံ ကောင်းပေမယ့် ထောင့်ကန်ဘောတွေမှာ တော်တော်ဆိုးရွားတယ်လို့ ဆိုခဲ့သလို လုခ်ရှောအနေနဲ့ တည်ကန်ဘောတွေကို မကန်သင့်တဲ့ သဘောမျိုးပါ ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ရိုးမားအသင်းရဲ့ တာဝန်တွေကို စတင်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုခင်မှာ အားနေပုံရတဲ့ မော်ရင်ညိုဟာ အင်္ဂလန်နည်းပြ ဂါရက်သ် ဆောက်ဂိတ်ကိုလည်း ဆရာလုပ်သလို ပြောခဲ့သေးတာဖြစ်ပြီး ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှာ နောက်ခံလူ မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒက်ကလန် ရိုက်စ်၊ ဖီးလ် ဖိုဒန်၊ ကယ်လ်ဗင် ဖိလစ်တို့ကို အဝါထိမှာစိုးလို့ မသုံးသင့်ဘူးလို့ ဆိုသွားခဲ့သေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဆောက်ဂိတ်ကတော့ သူ့အလုပ်သူပဲ လုပ်ခဲ့ပြီး ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှာ အင်အားပြည့်လူစာရင်းကို ထုတ်သုံးပြီး လေးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သလို တစ်ပွဲလုံးမှာလည်း အဝါကတ်တစ်ကတ်မှ မထိခဲ့ဘဲ မော်ရင်ညိုပြောတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြသွားခဲ့သလို ဝေဖန်မခံရအောင်ပါ လုပ်ပြသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မော်ရင်ညိုကတော့ နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကို အင်္ဂလန်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကို ဝေဖန်လေကန်ခဲ့ချိန်မှာ အလွဲတွေနဲ့ပဲ လူရယ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပြီး သူ့စကားကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဆီမှာ လူကြီးရှက်တော့ စပ်ဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိုအငဲရဲ့ စကားကိုပဲ သတိရစေခဲ့တာဖြစ်ပါကြောင်း…..။
ZAWGYI: ႐ိုးမားနည္းျပသစ္ ဂ်ိဳေဆး ေမာ္ရင္ညိဳကေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္မွာ နည္းျပခဲ့စဥ္က ဘယ္ေနာက္ခံလူ လုခ္ေရွာနဲ႔ မတည့္တဲ့ကိစၥကေတာ့ လူသိအေတာ္မ်ားခဲ့ၿပီး သူတို႔ၾကားမွာ မေက်လည္မႈေတြ ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာ အဂၤလန္သားအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ နည္းျပေဟာင္းကို ဟားတိုက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို မေန႔ညက ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ယူကရိန္းနဲ႔ပြဲမွာ ဟာရီကိန္းနဲ႔ မက္ဂြိဳင္းယားတို႔အတြက္ ႏွစ္ဂိုးဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ လုခ္ေရွာက ပြဲအၿပီး အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္မႈေတြက ေမာ္ရင္ညိဳအတြက္ တစ္ခုခုေျပာစရာမ်ား ျဖစ္မလားလို႔ အေမးခံရခ်ိန္မွာ သူက ရယ္က်ဲက်ဲနဲ႔ “ဒီလိုဗ်။ ဂ်ိဳေဆး ကြၽန္ေတာ့္ကို ဘယ္လိုထင္လဲဆိုတာက အေရးမႀကီးပါဘူး။ သူ Talk Sport မွာ အလုပ္လုပ္ေနေတာ့ ေျပာခ်င္တာေလွ်ာက္ေျပာခဲ့တာျဖစ္သလို အဲ့ဒါက သူ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ပါ။ သူႀကိဳက္တာ သူေျပာလို႔ရတယ္ေလ”လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။
“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ေနမွာပဲ။ အဂၤလန္လက္ေ႐ြးစင္အသင္းနဲ႔ပဲ အာ႐ုံစိုက္ထားၿပီး က်န္တာ အကုန္ လ်စ္လ်ဴရႈထားပါတယ္။ လက္ရွိတာဝန္က ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္း ႏိုင္ငံအသင္းကို ဘာျဖစ္ျဖစ္ အကုန္ေပးဆပ္ၿပီး ကူညီေပးဖို႔ပဲေလ”လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီး ေဝဖန္သံေတြကို နားေထာင္ေလ့မရွိေၾကာင္းနဲ႔ အေျပာသာ အဖတ္တင္တဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳကို ေခ်ျပသြားခဲ့တာပါ။
သူေျပာၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေမာ္ရင္ညိဳက “လုခ္ေရွာကစားတာက ပိုပိုၿပီးေကာင္းလာတယ္ဗ်”လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသြားခဲ့ၿပီး သူ႔ တပည့္ေဟာင္းရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကို အရွက္ေျပပုံစံနဲ႔ ေျပာသြားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ အဂၤလန္သားရဲ႕ ေျဖသြားပုံကို သေဘာက်ခဲ့ၾကၿပီး ေျဖအၿပီးမွာ ရယ္သြားတဲ့ပုံကိုလည္း ႏွစ္သက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၂၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေနာက္ခံလူဟာ အုပ္စုတြင္းပြဲစဥ္တုန္းက ခ်က္အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့စဥ္မွာလည္း ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ရေသးတာျဖစ္ၿပီး တိုက္စစ္ကစားပုံ ေကာင္းေပမယ့္ ေထာင့္ကန္ေဘာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ဆိုး႐ြားတယ္လို႔ ဆိုခဲ့သလို လုခ္ေရွာအေနနဲ႔ တည္ကန္ေဘာေတြကို မကန္သင့္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ ေျပာသြားခဲ့ပါေသးတယ္။
႐ိုးမားအသင္းရဲ႕ တာဝန္ေတြကို စတင္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳခင္မွာ အားေနပုံရတဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳဟာ အဂၤလန္နည္းျပ ဂါရက္သ္ ေဆာက္ဂိတ္ကိုလည္း ဆရာလုပ္သလို ေျပာခဲ့ေသးတာျဖစ္ၿပီး ယူကရိန္းနဲ႔ပြဲမွာ ေနာက္ခံလူ မက္ဂြိဳင္းယားနဲ႔ ကြင္းလယ္လူေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဒက္ကလန္ ႐ိုက္စ္၊ ဖီးလ္ ဖိုဒန္၊ ကယ္လ္ဗင္ ဖိလစ္တို႔ကို အဝါထိမွာစိုးလို႔ မသုံးသင့္ဘူးလို႔ ဆိုသြားခဲ့ေသးတာပါ။
ဒါေပမယ့္ ေဆာက္ဂိတ္ကေတာ့ သူ႔အလုပ္သူပဲ လုပ္ခဲ့ၿပီး ယူကရိန္းနဲ႔ပြဲမွာ အင္အားျပည့္လူစာရင္းကို ထုတ္သုံးၿပီး ေလးဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့သလို တစ္ပြဲလုံးမွာလည္း အဝါကတ္တစ္ကတ္မွ မထိခဲ့ဘဲ ေမာ္ရင္ညိဳေျပာတာနဲ႔ ဆန႔္က်င္ဘက္လုပ္ျပသြားခဲ့သလို ေဝဖန္မခံရေအာင္ပါ လုပ္ျပသြားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေမာ္ရင္ညိဳကေတာ့ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ကို အဂၤလန္ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ကို ေဝဖန္ေလကန္ခဲ့ခ်ိန္မွာ အလြဲေတြနဲ႔ပဲ လူရယ္စရာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး သူ႔စကားကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ၾကတဲ့သူေတြဆီမွာ လူႀကီးရွက္ေတာ့ စပ္ၿဖီးၿဖီးႀကီးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ကိုအငဲရဲ႕ စကားကိုပဲ သတိရေစခဲ့တာျဖစ္ပါေၾကာင္း…..။
ပင်နယ်တီမရလည်း ရတဲ့ အခွင့်အရေးကနေ ဂိုးရအောင် သွင်းတတ်ဆိုတာ ပြသခဲ့တဲ့ မက်ဆီ
ဟာရီကိန်း ပြန်လာခဲ့တဲ့ ယူကရိန်း 0-4 အင်္ဂလန်ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ ဆိုစရာ7ချက်
လျှပ်စစ် ဆန်းချက်ဇ်အစွမ်းနဲ့ စူပါကိုပါ...
အိုင်ဗရီကို့စ်၊ မာလီနဲ့ ဂမ်ဘီယာတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့...
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် အီဟန်နာချို ဂိုးသွင်းပြီး...